VaTsenengamu Vokurudzira VaMnangagwa naVaChamisa Kuita Nhaurirano
Vaimbove murongi wemisangano yevechidiki muZanu PF, VaGodfrey Tsenengamu, vanoti kurwisa huori munyika kunobudirira chete kana vana veZimbabwe vakaita chirwirangwe zvisinei kuti vanobva kubato ripi rezvematongerwo enyika.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, VaTsenengamu, avo vakabviswa pachinzvimbo chavo musi weChitatu, vati havakendenge nekumiswa basa kwavakaitwa.
VaTsenengamu vatiwo kunyange hazvo vakabviswa pachigaro chavo, havasi kuzonyarara munyaya dzekurwisa huori. VaTsenengamu vati chido chavo chekurwisa huori ndicho chapa kuti vatange sangano rinonzi Zim First Agenda iro rine chinangwa chekurwisa huori.
Asi VaTsenengamu vati hondo yekurwisa huori inobudirira chete kana vana veZimbabwe vabatana.
Vati izvi zvinobudirira kana mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakaita hurukuro nemutungamiri weMDC, VaNelson Chamisa.
VaTsenengamu vati vane chinangwa chekuunganidza vatungamiriri vaviri ava kuti vasangane musi wa21 Kukadzi kuti vataurire veruzhinji zvikonzero zviri kuvatadzisa kuita hurukuro kuti vagadzirise matambudziko ari munyika.
VaTsenengamu varamba mashoko ekuti pane vari kuvashandisa mubato reZanu PF vakati vana veZimbabwe vese vane chido chekurwisa huori ngavabatane navo kuti vapanane mazano ekuti vangapedza sei huori munyika.
VaTsenengamu vaudzawo vatori venhau kuti vanokatyamadzwa zvakanyanya nekumiswa basa kwavo mushure mekutsoropodza vamwe vana muzvinabhizimusi vasiri mubato reZanu PF.
VaTsenengamu vati vanoshamiswa nehutungamiriri hweZanu PF uhwo husina kuvamisa basa pavakamboita musangano nevatori venhau gore rapera vakadoma vamwe vakuru mubato iri kusanganisira VaObert Mpofu naVaJoram Gumbo panyaya dzehuori asi vozomiswa basa vadoma vanhu vasiri nhengo dzebato iri.
Vaimbove mukuru wevechidiki muZanu PF mudunhu reHarare, VaJim Kunaka, vaudza Studio7 kuti kumiswa basa kwaVaTsenengamu naVaLewis Matutu mucherechedzo wekuti vakuru mubato reZanu PF ndivo vari kuita zvehuori.
Studio7 haina kukwanisa kutaura nemutauriri waVaMnangagwa, VaGeorge Charamba, sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata.
Asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko, Amai Monica Mutsvangwa, vaudza Studio7 parunhare kuti hurumende haina zvaingataura pamusoro pemashoko ataurwa naVaTsenengamu sezvo vanga vachitaura pfungwa dzavo.
Mutauriri wevechidiki mubato reMDC inotungamirirwa naVaNelson Chamisa, VaStephen Chuma, vati seMDC vakabvira kare vachitaura nyaya dzekurwisa huori. VaChuma vapomera vaMnangagwa mhosva yekuva nehuori vakati havangagoni kurwisa nyaya dzehuori munyika.
VaTsenengamu naVaMatutu vakaita musangano nevatori venhau neMuvhuro vakapomera mukuru weSakunda Holdings, VaKuda Tagwirei, VaBilly Rautenbach veGreen Fuels nemutungamiri weGrain Millers Association of Zimbabwe, VaTafadzwa Musarara, mhosva dzekuita huwori hwakanyanyisa munyika.
Kunyange hazvo VaTsenengamu vataura nevatori venhau vega, vati vachiri pamwe chete naVaMatutu.